Lifestyle • Health News Nepal
बुटवल , २१ फागुन २०७७ लोकप्रिय सर्जक डा. विष्णु मूर्ति भट्टराईको नयाँ गीत ‘घरबार’ सार्वजनिक भएको छ। पेशाले चिकित्सक समेत...
कोभिड देउसी ! भन भन भाइ हो, पीसीआर गर। कोभिड रोक्न, लागि पर। मान्छे जोगाउन ट्रेसिङ्ग गर। सबैले मास्क, लाउने...